Ukukhulelwa-Ukukhulisa | Septhemba 2021
Usuku Lwezingane 2020: Imibono Yokugqoka Kwezingubo Zokugqoka Zobuciko Zalolu suku ENdiya
Lolu suku lwezingane, hlobisa ingane yakho ngemibono yokugqoka efantisayo yezingane. Usuku lwezingane lugujwa ngokuthakaselwa okukhulu ezweni lethu. Zonke izikole nezikhungo zemfundo ziqhuba izinhlelo ngenhloso yokukhanyisela izingqondo ezisencane ngokubaluleka kwalolu suku.
Amathiphu ayi-10 Wokuthola Isisu Esiphansi Ngemuva Kwe-C-Isigaba
Ukuthola isisu esicaba ngemuva kwe-c-section akuyona into engenakwenzeka njengoba ucabanga. Uma ulandela ukuthunyelwa kwesisu okuthunyelwe okulungile kwesigaba, ungalahlekelwa yisikhwama. Ku
Izindlela Eziyishumi Zokunciphisa Usayizi Webele Ngesikhathi Sokondla Amabele
Kunezindlela ezinhle kakhulu zemvelo zokunciphisa usayizi webele ngenkathi uncelisa. Lezi zeluleko zihlukanisa amafutha ebele futhi ziqine. Nazi izindlela ezinhle kakhulu
Imibono Engu-30 Yokugqoka Okumnandi Osukwini Lwezingane
Usuku lwezingane selusondele. Nayi eminye imibono emihle yokugqoka emincane yokugqoka omncane wakho. Bheka.
Izeluleko Ezi-14 Ezilula Neziphumelelayo Zokunciphisa Isisindo Ngemuva Kokukhulelwa
Nawa amanye amathiphu asebenzayo wokwehlisa isisindo ngemuva kokukhulelwa okubandakanya ukuncelisa, ukuphuza amanzi, ukuzivocavoca umzimba, ukudla ukudla okunempilo, ukulala ngokwanele nokungaphuzi utshwala.
Ukudla okungu-8 kokukhulelwa ingane yomfana
Okunye ukudla ukukhulelwa umfana kungakusiza ukuthi wandise amathuba akho okuthola umntwana wesilisa. Uma udla lokhu kudla ukukhulelwa umfana ngokwemvelo, amathuba akho okuthi
Izindawo ezihle kakhulu nezimbi kakhulu ngesikhathi sokukhulelwa
Abesifazane abakhulelwe kufanele bagweme ukuhlala nemilenze ewele. Kunconywa ukuthi uphendule wonke umzimba kunokumane ukhombe okhalweni. Izikhundla kufanele zishintshwe futhi ziguqulwe njalo.
Izimpawu ZeBelly Ukukhombisa Ukukhulelwa Kwakho Ngomfana
Lapho ukhulelwe, kungakulinga ukuzama inhlanhla yakho ngezindlela ezahlukahlukene zokubikezela ubulili.
Ukudla Okuphezulu Okungu-10 Okufanele Kudliwe Ngesikhathi Sokukhulelwa Komntwana Okhaliphile
Ukudla okudliwa ngumama ngesikhathi ekhulelwe nakho kudlala indima ekutheni umntwana uzoba ohlakaniphile noma ohlakaniphe kangakanani. Isipinashi, izithelo, amaqanda, ushizi, nokunye, okunye ukudla umama angakudla ngesikhathi sokukhulelwa kwakhe.
Isisu Sesisu Ngemuva Kwe-C-Isigaba Kuyadingeka
Ukugqoka ibhande lesisu ngemuva kokubeletha ngokuhlinzwa kuyadingeka. Ukwazi ukuthi kukusiza kanjani ukubuyela esimeni futhi kusiza nasekululameni kwesigaba se-C ..
Izikhukhula Ezinganeni: Izimbangela, Amathiphu Wokuma Futhi Ukuvimbele
Ama-hiccups ayenzeka lapho izinkontileka ze-diaphragm yengane zidala ukuthi umoya uphume ngamandla ngamandla ngamaphimbo avaliwe, okwenza umsindo ungahambi kahle. Kuvamile kakhulu ezinganeni ezingaphansi kwezinyanga eziyi-12 ubudala.
Ingabe Bewazi Ukudla Upopo, I-Aloe Vera Nophayinaphu Kungadala Ukukhulelwa Kwesisu Ekukhulelweni Kwasekuqaleni?
Ukudla okuthile okufana nopopo, izigubhu, i-aloe vera, uphayinaphu, amapentshisi kungadala ukukhulelwa kwesisu lapho kudliwa ngesikhathi sokuqala sokukhulelwa. Xoxa njalo nodokotela wakho ngokudla nemikhuba yakho yokudla ngesikhathi ukhulelwe.
Kungenzeka kanjani ukuthi ukhulelwe ngaphandle kocansi?
Kungenzeka Yini Ukukhulelwa Ngaphandle Kokuya ocansini? Yebo, kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi ukhulelwe ngaphandle kocansi. Yize iphesenti lincane kakhulu, kepha kungenzeka.
Yini Ebangela Ukuba Nesibindi Esinzima Ngesikhathi Sokukhulelwa?
Ukunwebeka kwesibeletho, ukukhula kwamathambo embungu, uhlobo lomzimba womama, izimpawu zokwelula njll, kungenza isisu sibe nzima ngesikhathi sokukhulelwa. Ukufunda kabanzi ngezizathu kuzokusiza wehlise umoya futhi uqonde ukuthi isisu sakho esinzima sijwayelekile yini noma sidinga ukubhekwa ngokujulile kusuka ku-ob-gyn.
Izithelo Ezomile Namantongomane Ngesikhathi Sokukhulelwa: Izinzuzo, Izingozi nokuthi Ungadla Kanjani
Izinzuzo zokudla izithelo ezomile namantongomane ngesikhathi sokukhulelwa ukuthi ziyasiza ekuvimbeleni ukuqunjelwa, zenyuse ukubalwa kwegazi, zilawule umfutho wegazi, ziqinise amathambo njll.
Isonto Lomhlaba Lokubeletha Lika-2020: Izindlela Ezi-13 Zemvelo Zokukhuthaza Ukutholakala Kobisi Lwebele
IViki Lomhlaba Lokubeletha (WBW) ligcinwa minyaka yonke kusuka ngomhlaka 1 kuya ku-7 Agasti. Izindlela zemvelo zokuthuthukisa ukunikezwa ubisi lwebele noma ukukhiqizwa kufaka amanzi okuphuza njalo, ukuphumula okufanele nokulala njalo, ukudla okunempilo, ukuxhumana kwesikhumba nesikhumba njll.
Kungani Kufanele Udle Ukhukhunathi Ngesikhathi Sokukhulelwa
Nakhu ukuthi kungani abesifazane abakhulelwe kufanele badle ukhukhunathi. Manje izinzuzo zikakhukhunathi ngesikhathi sokukhulelwa futhi ziphephe kakhukhunathi ngesikhathi sokukhulelwa. Funda ukuze wazi ukhukhunathi
Izindlela Eziphephile Neziphumelelayo Zokukhipha Isisu Ekhaya
Ukukhipha isisu kungenziwa ngokwemvelo nangokuqondiswa kwezokwelapha. Indlela yemvelo ifaka ukusetshenziswa kwama-laxatives, amakhambi afana neparsley, izithelo ezicebile ku-vitamin C ngenkathi izindlela ezigadiwe zokukhipha isisu zidinga udokotela wezifo zabesifazane.
Ingabe iMaggi iphilile ngesikhathi sokukhulelwa? Ukuhlaziywa Kwesazi
Ingabe i-maggi iphilile ekukhulelweni? Iqukethe isithako esibizwa nge-MSG esiyinhlanganisela enobuthi. Uma idliwe ngokulinganisela ayilimazi kepha uma udla
Izinyanga eziyi-8 Izinyathelo Zokuqapha Zokukhulelwa Okumele Zilandelwe
Nalu uhlu lwezinyathelo eziyisishiyagalombili zokukhulelwa okumele uzilandele ukuze uthole umsebenzi ophephile futhi onenkinga
izinzuzo ze-jeera namanzi ajwain
ungayenza kanjani i-falooda ngomxube we-falooda
izinzuzo zesikhumba se-orange kwesikhumba
izinzuzo zokuphuza ijusi le-mosambi nsuku zonke
u-armaan jain no-kareena kapoor ubudlelwane